Semalt dia mamaritra 5 ny angano izay manimba ny SEO Reputation
Raha manao fikarohana momba ny fiarovana ny fandinihan-tena sy ny fikarohana momba ny fiarovana ny SEO ianao, dia ianaodia ho gaga ny sasantsasany amin'ireo valim-panavotana lehibe izay tonga rehefa mitady ny teny hoe 'SEO'. Raha ny marina, Google dia manosika ny ratsy tsy metyfanamarihana eo akaikin'ny teny SEO. Izany dia mitarika ho amin'ny fanandramana fa io fomba fanao io dia nahazo laza ratsy tany.
Raha ny marina, SEO dia manamora ny automated search engine bots and spiders to accesstranonkala iray, mamoaka ny tanjony sy ny heviny ary manasongadina ny votoatiny amin'ny fanamarihana amin'ny ho avy avy amin'ny mpikaroka. Izany dingan'ny fandaminana izanyNy tranonkala dia mahatonga azy io haingana sy mora ho an'ny mpampiasa motera sy ny milina fikarohana toy izany afaka mamokatra valin'ny fikarohana mety ho an'nyfikarohana voafaritra manokana - lente polarizada oakley.
Artem Abgarian, tompon'andraikitra manam-pahaizana Semalt Digital Services, manazava hoe aiza ny SEO no malaza ratsy.
1. Mailaka tsy fantatra
SEO ho toy ny sehatra vaovao sy ny fampiroboroboana dia manintona ny mpanaraka sy ny mpianatra. Ao amin'nymitady sehatra, ireo mpanaraka dia mikendry orinasa sy olona malaza miaraka amin'ny mailaka tsy mahazatra an-tsoratra izay mamarana ny biraonyisan-kerinandro. Ny fomba ametrahana ny ankamaroan'ny mpitsara manam-pahaizana dia manolotra azy ireny ho olona mamitaka sy mamitaka ka noho izany ny laza ratsyny tsena. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny mailaka dia manantena ny hamaha olana maro ho an'ireo orinasa vitsivitsy mba hino. Mitranga ihany koa ny sasany amin'izanyIreo manam-pahaizana manokana momba ny SEO dia tena mpaneso.
Ny teny fototra no fototra iorenan'ny SEO. Ampiasao tsara izany ary tadiavo ny valiny tianao. InNy fiheverana mitovy, ny famerimberenana na famerenana amin'ny teny an-tsipiriany na fametrahana ny teny fanalahidy mba hanamafisana ny valim-pikarohana fikarohana amin'ny sazy henjana ary mampahorytanjona amin'ny fanekena ny SEO. Ny lanjan'ny teny filamatra ho an'ny lahatsoratra dia tokony ho marina araka ny ampy mba hahatongavana eo amin'ny toerany tsara ary hisorokasazy avy amin'ny milina fikarohana.
3. Takelaka fanaingoana sy tranom-barotra
Ity fanao amin'ny famokarana fihazana ity dia midika fa ny fampiasana ny code HTML amin'ny votoatinylohahevitra iray miaraka amin'ny fikasana handrindrana ny fizakan-dàlana sy ny fisavana. Raha vao mampiasa ny rohy na pejy ny mpisera iray, dia alefa mankany amin'ny hafa tsy misy ifandraisanytranonkala ho an'ny votoaty tena izy izay nampiasaina ho fampandehanana ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala voalohany. Ny teknikam-pandehanana sy ny paositikaNy tsy fitovian'ny mpampiasa sy ny motera fikarohana izay mahatonga ny laza ratsy.
Fantatsika rehetra fa ny SEO dia manana e-varotra. Mpizaka tranokala sy mpitsabo SEOdia mahatsapa ny filàna ny fampiasana io hery io ka mahatonga ny fanao toy ny fividianana rohy mankany amin'ny fikarohana amin'ny fikarohana amin'ny fikarohana. Ireo rohy ireoMiala tsiny amin'ny alàlan'ny famoahana fahazoan-dàlana sandoka tsy misy fahita. Na izany aza, ireo fitaovana ara-dalàna toy ny Google diany fitrandrahana an'io fanao io sy ny fametrahana sazy henjana amin'ny olom-bitsy.
5. Fandraisana Content sy Rohy
Teknik malemy saina sy mamitaka izay ampiasaina hanafenana na hampisehoana votoaty samihafa amin'ny zavatrathe user clicks. Izy io dia azo fantarina ho toy ny lahatsoratra ao ambadiky ny sary na fotsy fotsy amin'ny fotsy fotsy. Tena mpitsabo SEO marinaMety tsy hampiasa io fomba fiasa io na dia mbola mahazatra aza izany ary manenina ny lazan'ny SEO.
Ny zava-maniry rehetra dia miaina sy manohitra ireo fanamby manan-danja mifandray amin'ny etika. TheNy orinasa SEO dia mamaly ary manaiky araka ny tokony ho izy ny fomba amam-panao tsy araka ny tokony ho izy.